(Sawirro)Machadka RPS oo shahaadooyin guddoon siiyay arday dhiganaysay qaar ka mida tacliinta laga baxsho – Radio Daljir
Febraayo 15, 2013 10:17 b 0
Gaalkacyo, Feb 15- Maamulka machadka RPS ayaa shahaadooyin guddoon siiyay arday muddo soo dhiganayay barashada caafimaadka,kombuyuutarka iyo luuqadda englishka.
Munaasabaddii shahaadooyinka lagu guddoon siinayay ardaydaasi oo ka badnaa sodomeeyo ayaa lagu qabtay hoolka dugsiga sare ee Cumar Samatar waxaana ka qayb galay, maamulka machadka, gudoonka waxbarashada degmada kan gobolka iyo isu duwaha wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Mudug.
Qaar ka mida ardayda machadka RPS ayaa xalfadda ka soo jeediyay gabayo murti huwan oo xambaarsanaa micno iyo miisaan aqooneed.
Ugu horayn waxaa taariikhda dugsiga iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray waxaa sharaxay maamulaha RPS Soomaaliya Maxamuud Dhooye, wuxuuna ardayda iyo ka qayb galayaasha uu u soo bandhigay waxa uu hiigsanayo RPS iyo himilooyinkiisa dhanka aqoonta, sidoo kale waxaa isaguna ardayda ku booriyay inay aqoontooda sii laba jibbaaraan macalin C/xakiin Caabi oo ka mida barayaasha machadka.
Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug Bashiir Axmed Khalaf oo munaasabadda soo xiray ayaa ardayda ku booriyay inaysan dayicin waxa ay barteen ee maanta shahaadooyinkooda ay qaadanayaan, isagoo dhanka kalana machadka ugu baaqay inay ardayda ay siiyaan koorsooyin kale oo wax ku ool u ah si ay aqoontooda u sii hormariyaan.
Khudbadaha masuuliyiinta machadka iyo marti sharaftii ka qayb gashay ka dib waxaa ardayda la siiyay shahaadooyinkii astaanta u ahaa inay dhamaysteen qaybihii aqooneed ee muddada soo baranayeen.
Machadka Ramadaan Private School (RPS) ayaa sanad kasta waxaa ka qalin jabiyay boqolaal arday oo barta qaybaha kala duwan ee culuumta aasaasigaa.